The Exorcist ( 2022 ) THE EXORCISTCM ကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခါအမိုက်စားဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်တဲ့ THE EXORCIST ဇာတ်ကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ပယောဂဆရာဖြစ်တဲ့ Lin Jiu ရဲ့ သူ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ Liu Yi Ze က Ding အိမ်ရဲ့သမီးဖြစ်သူ Ding Xiang နဲ့စေ့စပ်တဲ့အချိန်မှာ Ding အိမ်ကမိစ္ဆာအတတ်တွေနဲ့ ထိန်းချုပ်ခံထားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။မိစ္ဆာတွေကိုနှိမ်နင်းနေတဲ့ပယောဂဆရာတပည့်နှစ်ယောက်သိသွားတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုတွေဖော်ထုတ်ကြမလဲ ? ဘာကြောင့်များ Ding အိမ်ကိုထိန်းချုပ်ထားရတာလဲ ?ဆိုတာတွေကိုတော့ ဒီရုပ်ရှင်လေးကနေပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Quality : WEB-DL 1080p ,480p Format : mp4 Genres : Action , Thriller Runtime : 1h 26min Subtitle : Myanmar Subtitle ( Hardsub ) Translated by Chu Chu , Ann Chi , Nu Mon Encoded by LK
The Exorcist ( 2022 )
Father of the Bride (2022) သမီးရှင် .... အဖေဆိုတာ သူ့တို့အလှည့်တုန်းကသာ မိန်းမယူဖို့ တကဲကဲဖြစ်ပြီး ဇွတ်တွေ ယူကြပေမယ့် တကယ်တမ်း သူတို့ မိဘဖြစ်လာတဲ့အခါ သားသမီးကို တစ်ပါးသူလက်ထဲ ထည့်ပေးရမှာ အင်မတန် အူတိုကြသူတွေပါပဲ။ အထူးသဖြင့် သမီးရှင် ဖခင်တွေပါ။ သူ ပိုးမွေးသလို မွေးခဲ့ရတဲ့ သမီးလေးကို အနာဂတ်မှာ သမက်ဖြစ်လာမယ့်လူရဲ့ လက်ထဲကို အပြီးအပိုင် ပေးလိုက်ဖို့အရေးဟာ သူတို့အတွက်တော့ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုထက် ပိုပြီး ရင်ဆိုင်ရခက်ခဲတဲ့ ပြဿနာကြီးတစ်ခုပါ။ဒီ‌လူဟာ ငါ့သမီးနဲ့ သင့်တော်ရဲ့လား၊ ငါ့သမီးကို တင့်တောင်းတင့်တယ် ထားနိုင်ပါ့မလား၊ ငါ့သမီးအပေါ် ကောင်းပါ့မလား စတဲ့ စတဲ့ သံသယတွေနဲ့ လောင်မြိုက်ကြတာဆိုသည်မှာ မသိရင် သူတို့အလှည့်တုန်းက ပြီးပြည့်စုံနေသည့်အလား ..... ဒီ သ၀န်တိုမှုဟာ တစ်မျိုးလေးတော့ ချစ်စရာကောင်းနေပါတယ်။ ဖခင်ရဲ့ မေတ္တာပါပဲ .... ဒီဇာတ်လမ်းမှာလည်း ဘီလီဆိုတဲ့ သူဌေးကြီးဟာ သိပ်ကို ...
The Nanny’s Night (2021) Bianka လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက် ကတော့ ကလေးထိန်းတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် လူတွေ သိပ်မသိတဲ့ အချက်က သူက Lesbian တစ်ဦး ဖြစ်ရုံမက စေတန်ကိုးကွယ်တဲ့ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ် တစ်ရက်မှာတော့ မြို့ထဲက ပလတ်စတစ်ဆာဂျင် တို့ လင်မယား အိမ်ကို သူတို့ရဲ့ ၁၃ နှစ် သမီးလေး ညလုံးပေါက် ထိန်းဖို့ သွားရမှာပါသူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အမှန်ကရော သူတို့သမီးလေး ကို ထိန်းဖို့ အတွက်လားဘီယန်ကာ နဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်း ချာလီတို့ကရော အပျိုစင် ကောင်မလေး ကို ဘာလို့ အသည်းအသန် လိုက်ရှာနေတာလဲ သူတို့ ရဲ့ မျက်နှာဖုံး အောက်က အမှန်တရားက ဘာလဲHorror ဇာတ်ကားမျိုး ဖြစ်ပေမယ့် ရယ်စရာတွေလည်း အတော်ပါတာကြောင့် ဘယ်လို တိုင်ပတ်ပြီး အလွဲတွေ ဖြစ်ဦးမလဲ ဆိုတာ ...
Alchemy of Souls (2022) Alchemy of Souls (2022) အပိုင်း - ၄ TVN TVING နဲ့ Netflix တို့ရဲ့ အလန်းစား ဒရမ်အသစ်လေး လာပါပြီ။ cast တွေနဲ့တင် တစ်ဝက်လောက် ကြည့်သင့်နေတဲ့ ဒရမ်မာလေးပါ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ...ဒယ်ဟိုမြို့တော်က ကြီးမြတ်တဲ့ဂျန်မျိုးနွယ်မှာ မနှစ်မြို့စရာလျှို့ဝှက်ချက်နဲ့အတူ ဂျန်အူဂီကို မွေးဖွားခဲ့တယ်။ နောက်ကွယ်မှာတော့ တစ်မြို့လုံးက ဂျန်အူဂီနဲ့သူ့မိသားစုကိုမကောင်းပြောကြတာပေါ့။ ဖခင်ဖြစ်သူက သူ့အပေါ်မန္တန်နဲ့တားမြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတောင် မှော်ပညာကိုမသင်နိုင်လို့ ဂျန်အူဂီတစ်ယောက်ကတော့ ဒေါသပုံထပြီး သူ့စွမ်းအင်ကိုဖွင့်ပေးမဲ့ ဆရာကိုရှာဖို့ စိတ်အလိုဆန္ဒပြင်းထန်လိုချင်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအမြဲပြဿနာတွေနဲ့ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေတဲ့ ဂျန်အူဂီတစ်ယောက် တစ်နေ့မှာတော့ မူဒေါ့ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ မူဒေါ့ကတော့ တစ်ချိန်က အရိပ် လူသတ်သမားဖြစ်ပေမဲ့ သူ့မရဲ့ ဝိညာဉ်က အားနည်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ပိတ်မိနေပြီး စွမ်းအင်တွေပျောက်ဆုံးနေရှာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မူဒေါ့က ဂျန်အူဂီရဲ့ အစေခံဖြစ်လာပြီး နောက်ကွယ်မှာ တိုက်ခိုက်ဖို့ လျှို့ဝှက်သင်ပေးခဲ့တယ်။ ဂျန်အူဂီကလည်း မူဒေါ့ကို သူ့စွမ်းအင်တွေကို ဖွင့်ပေးမဲ့ သူ ...
My Friend ,The Enemy(2022) My Friend,The Enemy(2022)အပိုင်း (၁၀)"အနီးဆုံးရန်သူ"...................................Beam အဖြစ် - Patricia Wan အဖြစ် - Mo Mochanok Nick အဖြစ် - Pon Nawasch Wayu အဖြစ် - God Itthipatခေါင်းမာ ဒဲ့ပြောတတ်ပြီး စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်တတ်တဲ့ မိန်းမလှလေး “ဘင်" ဟာ သူမရဲ့ စိတ်ဆတ်မှုတွေကြောင့် သူမရဲ့ဘဝမှာ အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။“ဘင်"နဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ အနေအေးပြီး အကြံကြီးတဲ့ မိန်းကလေး “ဝမ်” “ဘင်" နဲ့ “ဝမ်” တို့ အမှတ်တမဲ့ နာမည်မှားယွင်းမှုကနေ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်။"ဘင်"ရဲ့ ချစ်သူတစ်ဖြစ်လဲ အနေအေးပြီး စိတ်ထားပျော့ပျောင်းတဲ့ကောင်လေး "ဝါယု" တစ်ယောက် မမျှော်လင့်ပဲ "ဝမ်"ဆီမှာ နစ်မျောသွားရင်း "ဘင်" နဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရပါတော့တယ်။“ဘင်” ရဲ့အမြင်မှာ “ဝမ်”ဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ဖြူစင်တဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းမလေးလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ တကယ့်စရိုက်မှန်တွေကိုသိလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့….သူငယ်ချင်းကနေ ရန်သူတွေဖြစ်သွားတဲ့သူတို့နှစ်ယောက် ....“ဝမ်” တစ်ယောက် ဘာဖြစ်လို့ “ဘင်" ...
My Friend ,The Enemy(2022)
Divided Heart(2022) Divided Heart(2022) အပိုင်း (၁) သွေးဖြင့်ရင်းသောနှလုံးသား --------------------------------------( စစင် / ကျို ) ( တဝမ်ချိုင် / ကျေ ) အဖြစ် - Mick Thongraya နလင် / နွန့် အဖြစ် - Thisa Waritthisa လုဝါ့ အဖြစ် - Jenny Chaysara​အမြွှာညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ဘဲ ပြဿနာတွေဖြစ်နေကြတဲ့ စစင် (ကျို) နဲ့ တဝမ်ချိုင် (ကျေ) တို့နှစ်ယောက် မိခင်သေဆုံးသွားပြီးနောက်မှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပိုပြီးအမြင်မကြည်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။မိခင်ရဲ့သေဆုံးမှုဟာ အဖေဖြစ်သူကြောင့်ဟု အပြစ်တင်ရင်း အဖေ့ကိုအမုန်းကြီးမုန်းနေတဲ့ စစင် (ကျို) တစ်ယောက် အိမ်ကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သိပ္ပံမေဂျာဌာနက ဆရာမချောချောလေး နလင် (နွန့်) တစ်ယောက် ထိုင်းနိုင်ငံပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ ညီအစ်ကိုအမြွှာနှစ်ယောက်နဲ့ဆုံမိရင်း သုံးယောက်သား သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နလင်ရဲ့ အိမ်နီးချင်းတစ်ဖြစ်လဲ ကျောင်းသူလေး ခုဝါ့တစ်ယောက် စစင်ရဲ့ အကူအညီတောင်းမှုကြောင့် နလင်နဲ့အောင်သွယ်​ပေးရင်း အနေနီးတဲ့ စစင်ကို တိတ်တခိုးချစ်မိနေပါတော့တယ်။ရုတ်တရက်ဆိုသလို စစင်နဲ့တဝမ်ချိုင်တို့ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူအသတ်ခံလိုက်ရတဲ့အပြင် သက်သေတွေပါပျောက်ဆုံးနေတဲ့အခါ တဝမ်ချိုင်ဟာ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်း နေတိဝပ်ကို အကူအညီတောင်းရင်း အမှုကိုစုံစမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အမှုကိုစုံစမ်းနေစဉ် ...
A Dream of Splendor (2022) CM ချစ်ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက် CM ကနေA Dream of Splendor ဆိုတဲ့ကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့ cast တွေကတော့(2006) သိမ်းဌက်သူရဲကောင်းဇာတ်ကားထဲမှာဂူးဂူးအဖြစ် လူသိများတဲ့ Liu Yi Fei ,The Romance of the Condor Heroes (2014) ဇာတ်ကားထဲမှာYang Guo အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Cheng Xiao တိုကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဂူးဂူးရဲ့ (၁၅) နှစ်ကျော်မှာcomeback အနေနဲ့ပြန်လာတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးလည်းဖြစ်တော့သေချာပေါက်ကောင်းမွန်တဲ့ဇာတ်ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်မှာအသေအချာပါဘဲနော်ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ဟန်ကျိုးမြိုမှာအခါးရည်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတဲ့ Zhao Pan Er ကတစ်နေ့မှာသတိုသားလောင်းဖြစ်တဲ့ Ou Yang Xu ဆီကမြိုတော်မှာစာမေးပွဲအောင်ကြောင်းသတင်းကြားသိရတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲ Zhao Pan Er ကိုမျိုးရိုးနိမ့်လိုဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စေ့စပ်ပွဲဖျက်သိမ်းကြောင့်သတင်းပါကြားသိရတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ Zhao Pan Er ကလက်မခံနိုင်ပဲမြိုတော်ဆီသွားပြီးတရားမျှတမှုကိုရအောင်ရှာမယ်ဆိုပြီးကတိပြုခဲ့တယ်။မြိုတော်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာအိမ်ထောင်ရေးမှာလိမ်ညာလှည့်စားသွားခံရတဲ့ Song Yin Zhang ကိုကယ်တင်ရင်းညီအစ်မတွေလိုဖြစ်သွားခဲ့တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြိုတော်ဆီသွားတဲ့လမ်းမှာ အိမ်ထောင်ရေးကံမကောင်းတာကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်သတ်သေဖိုကြိုးစားနေတဲ့ Sun San Niang ကိုကယ်တင်ရင်း Zhao Pan Er, ...
Eraser (1996) Eraser (1996)Eraser Reborn ဆိုပြီး 2022 မှာ ပြန်ရိုက်တာကိုတွေ့ရတော့ မူလ အာနိုးကားကြီးကို သွားသတိရတာနဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို တင်ဆက်ဖြစ်တာပါ။ Total Recall ကိုတော့ နောက်ရိုက်တဲ့ကားပဲ တင်ဆက်ဖြစ်ပေမဲ့ Eraser ကတော့ အဲဒီခေတ်ကတည်းက မိုက်တာမလို့ ကြည့်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ငယ်ဘဝ ဗီဒီယိုရုံမှာကြည့်ခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်လို့ ကလေးဘဝကို ပြန်ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ သေနတ်ကြီးနှစ်လက် တဖက်တချက်ကိုင်ပြီး ကွင်းပြင်မှာ ထီးထီးကြီး ရပ်ပစ်တဲ့ မြင်ကွင်းတွေလေ။ ကလေးဘဝကဆိုတော့ သိပ်မိုက်ပေါ့။ ဆော့ကစားကြပြီဆိုရင် မင်းသားလုပ်ချင်တဲ့သူ သိပ်များတာကိုးဗျ။ မင်းသားဆို ဘယ်လောက်ပစ်ပစ် မသေဘူးဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်ကို လူတိုင်းလိုက်နာခဲ့တုန်းကပေါ့။မင်းသားကြီး အာနိုး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကား Eraser ရဲ့ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ သိပ်ပြောစရာမရှိပါဘူး။ နိုင်ငံတော်အဆင့် ကန်ထရိုက်သမားတွေက လက်နက်သုတေသနမှာ စွမ်းအားမြင့်လက်နက်ဖြစ်တဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက် မြန်နှုန်းမြင့် အလင်းတန်း ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်တွေကို တီထွင်နိုင်ပြီးနောက် မူလစာချုပ်ရှင် ...
Special Package 145
EXTENDED Blu-Ray 1080p
Archives Select Month June 2022 May 2022 April 2022 March 2022 February 2022 January 2022 December 2021 November 2021 October 2021 September 2021 August 2021 July 2021 June 2021 May 2021 April 2021 March 2021 February 2021 January 2021 December 2020 November 2020 October 2020 September 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 May 209